Chọpụta ihe ị ga-ahụ na obodo Stockholm | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Stockholm
Stockholm bụ isi obodo Sweden na obodo ya kacha ibu. Obodo a bụ ebe ndị njem nlegharị anya nke ukwuu ma jiri ya kpọrọ ihe nke ukwuu maka obodo ochie ya, ụlọ ya, gburugburu ya, oghere okike ya na ala ya. Ọ ghọwo otu n'ime obodo ndị kachasị eleta na Scandinavia, ọ bụghị obere, ebe ọ bụ na ebe ahụ anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ebe ngosi ihe mgbe ochie, ihe ntụrụndụ na ihe ncheta.
Anyị ga-enye gị ụfọdụ echiche banyere ihe ịhụ na Stockholm, obodo Europe na Scandinavia nke nwere ọtụtụ àgwà. Site na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa gaa na mpaghara ndị dị mkpa nke na-apụta na ntuziaka njem niile. E nwere mpaghara agaghị echefu n’obodo a mara mma.
1 Gamla Stan ma ọ bụ Old Quarter
3 Ebe ngosi Vasa
4 Södermalm na Östermalm
5 Agwaetiti Djurgarden
6 Skansen Open Air Museum
7 Zọ ụgbọ mmiri
8 Katidral Stockholm
Gamla Stan ma ọ bụ Old Quarter
Otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị n'obodo Stockholm bụ mpaghara Gamla Stan, agbata ochie. E hiwere agbataobi a na narị afọ nke XNUMX ma bụrụ site na mgbe ochie. Na mpaghara a, ị ga - ahụ ụlọ ndị mara mma mara mma nke jikọrọ ọnụ, chọọ mma na ụda mara mma nke na - enye obodo ahụ akụkụ pụrụ iche. Ọ bụ ebe dị jụụ ebe ọ bụ naanị na a ga-eji ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya ígwè na-ekesa ya ma a na-agbachi okporo ụzọ ya. Na agbata obi ị nwere ike ịhụ obere ebe egwuregwu na mmanya ochie na etiti obodo.
Palacelọ a bụ nke ewuru na iri na ato, ọ bụ ezie na dịka anyị na-ahụ ya taa ọ malitere na narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ n'ezie nnukwu obí, nwere ihe karịrị narị ụlọ isii, ọ dịkwa na agbata obi Gamla Stan. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ ahụ, ịnwere ike ịhụ ebe agha ma ọ bụ ụlọ akụ. Kwesịrị ịlele oge ahụ tupu oge eruo, dịka ọ dịgasị n'oge oge a. Na mgbakwunye, obí eze dị n'akụkụ oke osimiri, yabụ gburugburu mara mma nke ukwuu.
Ebe ngosi Vasa
Na Vasa Museum enwere ike ịchọta otu n'ime ihe ngosi kachasị ịtụnanya n'obodo. Ọ bụ ihe gbasara a ezigbo XNUMXth narị afọ ụgbọ mmiri a na-echekwa ya nke ọma, ebe ọ bụ naanị otu akụkụ ka emegharịrị. Ọ bụ naanị ụgbọ mmiri sitere n'oge a echekwara nke ọma. Ejila ọtụtụ narị ihe a pịrị apị chọọ ụgbọ mmiri ahụ. N'ebe ngosi ihe mgbe ochie ị nwekwara ike ịmụ banyere akụkọ ihe mere eme nke Vasa, ụgbọ mmiri a nke dara na Baltic ma nọrọ n'ọnọdụ dị mma n'ihi eziokwu ahụ bụ na ndị na-eri osisi ya adịghị n'oké osimiri a.
Södermalm na Östermalm
Södermalm bụ agbata obi na-arụ ọrụ na klas. Taa ọ bụ otu n'ime mpaghara kachasị ọhụrụ na nke ọzọ na obodo ahụ, ebe ị nwere ike ịchọta ụlọ ahịa kachasị na nke kachasị mma. N’ebe ndị ahụ e nwere ụlọ ochie na ebe a na-ere ihe ọ cafụ niceụ ndị mara mma. N'aka nke ọzọ, ógbè Östermalm bụ akụkụ mara mma nke obodo ahụ. Na agbata obi ị nwere ike ịchọta ụlọ ahịa na ụlọ ịgba egwu abalị, yana nnukwu ụlọ ndị mara mma, ebe ọ bụ otu n'ime ebe kachasị ọnụ ahịa obodo ahụ.
Djurgarden emi odude ke ufọt Stockholm na e kwusara dị ka nke mbụ Ogige National European dị n'etiti obodo. N'oge gara aga, ọ bụ ebe a na-etolite moose, a na-azụ azụ na ele. Taa, ọ ka bụ ebe ọtụtụ anụmanụ na ụmụ mmadụ ole na ole bi. N'àgwàetiti a, e nwere ọtụtụ ebe nkiri ezinụlọ na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
N'ime agwaetiti Djurgarden bụ ebe a ụlọ ngosi ihe mgbe ochie dị jụụ. Thelọ ihe ngosi nka ahụ metụtara akụkọ ihe mere eme na ọdịnala nke Sweden n'ihe karịrị ugbo 100 na-anọchite anya ụlọ ndị a na-ahụkarị na mba ahụ. Ọ dị ka a ga - asị na ọ bụ obere Sweden. Muselọ ihe ngosi nka a bụ ebe ntụrụndụ zuru oke maka ezinụlọ dum, ebe enwere ụlọ nri na ọtụtụ ntụrụndụ, yana ohere ịmụtakwu banyere ọdịnala Swedish.
Zọ ụgbọ mmiri
Onwere ihe aga eme n’obodo a na odi nkpa. Mee a routezọ ụgbọ mmiri bụ kpochapụwo na obodo, inwe ike ihu obodo site na uzo ozo. Enwere ike ịhọrọ njem dị iche iche ụgbọ mmiri. Obere njem na-ewe anyị awa ole na ole iji hụ obodo ahụ, ndị toro ogologo na-achọpụta agwaetiti na agwaetiti ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ. Ga-ewe otu ụbọchị iji mee otu n'ime ụzọ ndị a, ebe ọ bụ na obodo a makwaara dị ka Venice nke North.
Na obodo a, e nwekwara katidral, ọ bụ ezie na ọ bụghị otu n’ime ihe ncheta ndị a kacha eleta. Olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ, ọ bụ na ochie nkeji Gamla Stan. E wuru katidral ahụ n'ụdị Baroque na n'ime ya enwere ọrụ nka, dị ka ihe osise nke Saint George na Dragọn ahụ, malitere na narị afọ nke XNUMX. Y’oburu n’inwe kaadi kaadi Stockholm ga-ekwe omume ibanye na katidral a na ihe ncheta ndi ozo di nkpa, ya mere o bu nnukwu echiche iwepu ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Stockholm » Ihe ị ga-ahụ na Stockholm